Politika avokoa izay mihetsika sy ihetsehana rehetra… | NewsMada
Politika avokoa izay mihetsika sy ihetsehana rehetra…
Hatramin’izao, tsy hita izay tena vahaolana amin’ny fitakiana sendikaly etsy sy eroa. Na ialana fotsiny amin’ny hoe efa fitakiana politika… Avadika ho politika hatrany izay mihetsika rehetra, indrindra rehefa tsy hita izay tena vahaolana.
Tsy mahalala afa-tsy politika? Na izay no antom-pisian’ny sasany… Tsy inona fa fiarovan-toerana, fampiasana ny fahefam-panjakana ho amin’ny tombontsoan’ny tena manokana? Pahina amin’izany ho azy amin’izay mihetsika rehetra.
Tsy mahagaga raha nipoitra sy nahazo vahana ho azy tamin’ireny fidinana an-dalambe ireny, ohatra, ny fitakiana ny fialan’ny mpitondra… tsy mahavaha olana: tsy fandriampahalemana, fidangan’ny vidim-piainana, fandrobana tany etsy sy eroa…
Manampy trotraka izany ny fitakiana sendikaly… niotrika ela. Ny mahavariana sy mahavalalanina, avadika ho politika mbamin’izay mba fivahan’ny olana amin’izany, na tsy ny tena na izay olom-pehezin’ny tena aza no nahavaha azy.
Karazan’izany, ohatra, ny fampiakarana an-dapa ny sasany navotsotry ny mpaka an-keriny rehefa nandoavana volabe. Atao fitaovana politika rehefa misy azo ibontsinana hoe manao sy mahavita zavatra? Na tsy hita mazava aza izay tena natao…
Mampievotrevotra tsy amin’ny antony izay heverina na sandohina ho fahombiazana? Na ny hafa aza no tena nikely aina taminy. Tsy mahagaga, antomotra ny fifidianana: atao avokoa izay hahatsaratsara endrika ny tena… isehoana ivelany.
Nefa tsy takona afenina ny tsy fahombiazana lava. Tsy bado na zazabodo ny vahoaka ka tsy hahalala fa avadika ho politika amin’izay mahametimety ny tena izay mihetsika sy ihetsehana rehetra. Manginy fotsiny ny tsy fahatanterahan’ny teny nomena.
Izany no mba hoe politika fa tsy hita izay fanovana, fampandrosoana, fanatsarana ny fiainam-bahoaka ahay… Mahazo vahana loatra tsinona ny tsy fanarahan-dalàna, ny raharaham-pirenena ananan-kavana, ny fisian’ny tsimatimanota, ny kolikoly…
Izay politika seho ivelany izay ve no hoe fahombiazana? Ho fahavoazana fa hitsara ny vahoaka…